Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Hotelada & Dalxiiska Wararka » Miyuu hudheellada maalinlaha ah ee hudheellada dhintay?
Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Falanqaynta warshadaha ee aan soo aragnay ayaa tilmaamaysa in isbeddellada guriyeynta ay horseedi karaan kayd 100- ilaa 200 oo saldhig u ah taas oo saamayn ku yeelan doonta waxqabadka hoteellada. Si kastaba ha ahaatee, yaraanta shaqada iyo tababarka dheeraadka ah ee shaqaalaha guriga ayaa u baahan hadda kadib markii aysan nadiifin qolalka waqtigaan oo dhan waxay ka horjoogsanaysaa heerka waxsoosaarku inuu sarreeyo.
Huteelo badan ayaa lagu qasbay inay dilaan adeegyada inta lagu jiray masiibada.
Hakinta dayactirka guri -maalmeedka waxay ka mid ahayd ikhtiyaarrada hoteello badan.
Hilton wuxuu ka mid ahaa kuwii ugu horreeyay ee la soo baxa mowqif rasmi ah oo ku saabsan ilaalinta guryaha.
Hoteellada ayaa ku dhibtooday inay toosnaadaan sannadka 2020: jebinta xitaa waxaa loo arkaa inay tahay wax weyn. Si taas loo sameeyo, hoteello badan ayaa lagu qasbay kuwa aan la maareyn karin - inkasta oo ay lagama maarmaan tahay - hawsha ah in adeegyada la jaro halka ay awoodaan.
Midda ugu yaabka badan waxay ahayd welina ay tahay hakinta dayactirka guryaha maalinlaha ah ee hoteello badan. Adeegga, mar haddii loo oggolaaday martida, wuxuu noqday codsi la gaarsiin karo oo caadiyan aan la bixin illaa maalmo badan ka dib markii la soo galo.
Hilton wuxuu ka mid ahaa kuwii ugu horreeyay ee la soo baxay mowqif rasmi ah oo ku saabsan ilaalinta guriga, laakiin magacyada badankood way raaceen, ama waxay ku sheegeen meelaha dadweynaha ama u wargeliyeen macaamiisha markay is -baareen. -19, laakiin iyaduna, waxaa loo arkay inay tahay kaydiyaha lacagta, xaddidaysa saacadaha shaqaalaha guriga.
Dadka qaar ayaa sheegaya in u guuritaanka codsiga guri-ilaalintu uu yahay mid ka mid noqon kara adeegyo iyo adeegyo aan kala go 'lahayn, oo la mid ah sida ay u shaqeeyaan shirkadaha duullimaadyadu, halkaas oo ay ku jirto kharash ku lifaaqan waxyaabo kala duwan oo markii hore ahaa lacag-bixin.
Isbeddelku miyuu saamayn dhab ah ku leeyahay qadka hoose - kaydinta lacagta iyo kordhinta faa'iidooyinka? Ma sii socon doontaa marka degmooyinku kor u kacaan? Maxay u maleeyaan martidu?
Sida dhinacyada badan ee warshadaha hoteelka, arrintu way ka dhib badan tahay sida qofku u malayn karo jaleecada hore.